Home News DEG DEG: Labo Ruux Oo Lagu Toogtay Magaalada Muqdisho
DEG DEG: Labo Ruux Oo Lagu Toogtay Magaalada Muqdisho
nin ku hubeysanaa Qoray AK-47 ayaa waxuu rasaas huwiyay laba ruux oo la sheegay iney kamid ahayeen shacab saarnaa mooto bajaaj mareysay degmada Wadajir ee gobalka banaadir.
dadka deegaanka ayaa ino sheegay in Weerarkaasi ay ku dhinteen laba ruux oo mid kamid ah uu ahaa wadihii moota bajaajta, oo marayay Wadada Jid-Cakaaro ee degmada Wadajir ee Muqdisho.
ciidamo katirsan dowladda soomaaliya ayaa gaaray goobtaasi lagu tooktay labada ruux, inkastoo uu baxsday ninkii fuliyay weerarkaasi oo ilaa iminka aan la garan danta uu ka lahaa labadaasi ruux uu dilay.
saraakiisha ciidamada Amaanka dowladda Soomaaliya oo aan la hadalnay ayaa sheegay in weerarkaasi uu jiro, balse ay dib ka bixin doonaan faah faahin ku aadan cida fulisay weerarkaasi iyo ujeedka ka danbeeya labada ruux waxa loo dilay.
Maamulka degmada wadajir ayaa wali ka hadal labadaasi ruux ee lagu dhax dilay degmadaasi.